China CypB quantitative diski feeder rụpụta na Factory | Akụrụngwa Chengxin
CypB usoro quantitative diski feeder bụ ụdị nke volumetric nri akụrụngwa na-aga n'ihu nri. A rụnyere ya na nbudata nke ngwa nchekwa dịka silo, silo na bọket bọket.
CypB usoro quantitative diski feeder bụ ụdị nke volumetric nri akụrụngwa na-aga n'ihu nri. A rụnyere ya na nbudata nke ngwa nchekwa dịka silo, silo na bọket bọket. Ọ na-amanye ya site na-arụ ọrụ usoro nke diski feeder n'okpuru ndọda nke ihe onwunwe, na-nri n'ime ọzọ ngwaọrụ nọgidere na evenly. Mgbe ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ, ọ nwekwara ike ịrụ ọrụ nke mkpọchi mkpọchi. Ọ bụ a na-aga n'ihu mmepụta usoro Key akụrụngwa.
Usoro ntinye ihe ntaneti nke CypB bu ihe ohuru nke diski feeder ohuru nwere ntukwasi obi di elu, oru oma na nchekwa ike, nke ulo oru anyi haputara ma meputa ya site na igwu ala na inweta ihe omuma di elu nke ndi ozo ma jikọta ya na onodu China. Ọ ka elu na ezi uche na nhazi. O nwere njirimara ndị a:
1. Akụrụngwa na-ewepụta usoro nkwado rotary buru ibu, yana nnukwu ikike na ịrụ ọrụ siri ike.
2. The nnyefe usoro adopts ike nha nha elu gia nnyefe, nke nwere nnukwu nnyefe arụmọrụ na ogologo ọrụ ndụ. A na-etinye reducer na moto n'okpuru diski elu, na usoro akụrụngwa dum dị kọmpat.
3. Akụrụngwa na-ewepụta usoro mkpuchi pụrụ iche, akụkụ nnyefe na-ete mmanụ nke ọma ma mechie ya, ọ nweghịkwa okwu mba ofesi na-abanye n'akụkụ mmanu ahụ, iji hụ na akụrụngwa nwere ike ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu.
4. Usoro ntụgharị ọsọ ọsọ na-agbaso usoro njikwa ntụgharị oge na-agbanwe agbanwe, nke nwere nnukwu ọkwọ ụgbọ ala, ọtụtụ mgbanwe na njikwa ziri ezi.
5. A nakweere usoro ahụ zuru ezu n'ime ihe na-ebugharị ihe, nke na-eme ka njikwa ịdị ọcha dị na saịtị ahụ ma na -emepụta ọnọdụ ọrụ dị mma.
6. The modular na kemwepu Ọdịdị nakweere maka akụrụngwa ahụ na blanking aka uwe na-aghọta ngwa ngwa disassembly na nzukọ na saịtị. Enwere ike ịhọrọ ọnọdụ nwụnye nke nrịba ọ bụla n'ime ogo 180, nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe iji.
Performance diski dayameta Site t / h Nkesa bandwidth mm
NXU 1600 10 ～ 100 650
CYPBφ 2000 20 ～ 200 800
CYPBφ 2500 30 ～ 300 1000
CYPBφ 2800 40 ～ 400 .1200
CYPBφ3000 50 ～ 500 .1200
CYPBφ 3200 60 ～ 600 .1500
MZPB3600 90 ～ 900 ≤1600
Nke gara aga: Eriri, yinye feeder
Osote: Czg okpukpu abụọ uka jiji feeder
Emechie Disc feed
Ihe ngosi nri Disc
Ọnụ ego nri Disc
Ọnụọgụ nri Diski
Vetikal Disc feed